सयौं बालबालिकामा भेटियो एचआईभी एड्स रोग लगाउने भाइरस, के भन्छन् चिकित्सक ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सयौं बालबालिकामा भेटियो एचआईभी एड्स रोग लगाउने भाइरस, के भन्छन् चिकित्सक ?
सयौं बालबालिकामा भेटियो एचआईभी एड्स रोग लगाउने भाइरस, के भन्छन् चिकित्सक ?
जेठ ८ गते, २०७६ - ११:२२
दक्षिणी पाकिस्तानको सानो सहर रात्तो देरोमा एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिको लक्षण सर्वप्रथम फेब्रुअरी महिनामा देखा पर्‍यो।
आफ्ना बच्चालाई ज्वरो निको नभएको भन्दै केही अभिभावकहरू चिकित्सकलाई गुहार्न पुगेका थिए।
केही हप्तामै अरू बालबालिकामा पनि उस्तै समस्या देखा पर्‍यो। छक्क परेर डा। इमरान आरबानीले ती बालबालिकाको रगत जाँच्न पठाए।
रक्तपरीक्षणको परिणामले उनको शङ्का पुष्टि भयो। ती बालबालिकामा एचआईभीको सङ्क्रमण भएको थियो। कसैलाई त्यो कसरी भयो भन्ने थाहा थिएन।
समस्या कति गम्भीर ?
र, यो सङ्ख्या एउटा विकराल समस्याको सानो झल्को मात्र थियो। एचआईभी फैलिएको हल्ला चलेपछि रात्तो देरोको अस्पतालमा सिन्ध प्रदेशको सरकारले गत महिना एउटा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गर्‍यो। त्यहाँ रक्तपरीक्षण गराउँदा ७५ प्रतिशत बालबालिकसहित ६०७ भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी भएको पुष्टि भयो।
केही वर्षयता सो क्षेत्रमा एचआईभी फैलिएको पहिलो पटक भने हैन।सिन्धको लार्कानामा सन् २०१६ मा सो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको हल्ला चलेपछि हजारौँ मानिसको रक्तपरीक्षण गरिएको थियो। रात्तो देरो पनि लर्कानामा पर्छ।
सिन्ध एड्स नियन्त्रण कार्यक्रमका अनुसार त्यतिबेला १५ भन्दा बढी व्यक्तिमा एचआईभी भएको पुष्टि भएको थियो।सङ्क्रमण भएका अधिकांश व्यक्ति पुरुष थिए र तिनको सम्बन्ध लिङ्ग परिवर्तन गरेका स्थानीय यौनकर्मीहरूसँग थियो। त्यस्ता यौनकर्मीमध्ये ३२ जनामा एड्सको भाइरस पाइएको थियो।
पाकिस्तानमा वेश्यावृत्ति अवैध भए पनि लर्कानाका लजमा लुकीछिपी यौनकर्मीहरूले आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। एचआईभी फैलिएको पत्ता लागेपछि सरकारले त्यस्ता स्थानमा कारबाही गर्‍यो।
अहिले कसरी फैलियो ?
सिन्ध एड्स नियन्त्रण कार्यक्रममा कार्यरत डा। असद मेमोन प्रत्यक्ष नभए पनि सम्बन्ध हुन सक्ने बताउँछन्।
‘मलाई लाग्छ उच्च जोखिममा भएको समूहका सदस्यले (लिङ्ग परिवर्तन गरिएका र महिला यौनकर्मी) भाइरस बोकेका थिए। अनि स्थानीय तहमा काम गर्ने अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको असावधानीपूर्ण अभ्यासले सङ्क्रमण अरूमा सर्‍यो,’ उनले बीबीसीलाई भने।
त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीमा स्वास्थ्यसहायकदेखि चिकित्सकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर क्लिनिक चलाउने अप्रशिक्षित तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेका तर अस्पतालमा काम गरेको अनुभव नभएका व्यक्ति पनि छन्।
एउटै सुई धेरै चोटि प्रयोग गर्दा पनि भाइरस सर्न सक्छ
पाकिस्तानका ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामीहरू प्रायस् दक्ष चिकित्सककहाँ नगएर त्यस्ता व्यक्तिकहाँ जान्छन्। किनभने त्यस्ता अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूले कम शुल्क लिन्छन् तथा सजिलै उपलब्ध हुन्छन्।
एचआईभी भएका बालबालिकामा विशेषज्ञता भएकी आगा खान युनिभर्सिटी अस्पतालमा कार्यरत डा। फालिमा मिर अहिले रात्तो देरामा स्वयंसेवा गर्दैछिन्।
असावधानीपूर्वक गरिएको अभ्यासकै कारण बालबालिकामा एचआईभी फैलिएको र यसको सम्बन्ध सन् २०१६ को महामारीसँग हुन सक्ने उनको पनि धारणा छ।
ूबालबालिकालाई तीन तरिकाले सङ्क्रमण हुन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘भाइरस भएकी र स्तनपान गराउने आमाबाट, बाहिरबाट रगत दिँदा वा शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सङ्क्रमित उपकरण अथवा सुईबाट।’
उनले हेरेका अधिकांश बिरामीमा आमामा एचआईभी छैन, तर केही बालबालिकामा भने रगत दिइएको थियो। यसको अर्थ स्थानीय स्वास्थ्यकेन्द्रमा धेरै बिरामीलाई एउटै सुई प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ।
सङ्क्रमित सबै व्यक्तिलाई आफूले नहेरेको भन्दै उनले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोपको खण्डन गरेका छन्।
डा। मुजफ्फर गाङ्रोले आफूले एचआईभी नफैलाएको दाबी गरेका छन् । सिन्धमा एचआईभी सङ्क्रमणको दर पाकिस्तानमै सबैभन्दा उच्च छ।
त्यहाँ पुनः महामारी फैलिएपछि सरकारले कारण पत्ता लगाउन छानबिन सुरु गरेको छ। तर त्यसबाट सङ्क्रमण भइसकेका र आजीवन त्यसको असर खेप्नुपर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दैन।
रात्तो देराको अस्पतालमा स्थापित शिविरमा एप्रिल २५ देखि अहिलेसम्म १८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले परीक्षण गराएका छन्।
यसको अर्थ के हो भने सयौँ बिरामीका अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको स्वास्थ्य र आफनो दैनिक जीविकोपार्जनको चिन्तामा छन्।आफ्नी तीन वर्षीया छोरीलाई एचआईभी भएको पत्ता लागेपछि एक महिलाले बीबीसीसँग आफ्नो त्यस्तै चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘लार्कानामा ठूलो उमेरका मानिसलाई औषधि उपलब्ध छ। तर बच्चाको औषधि लिन कराची जानुपर्छ। त्यो भनेको प्रत्येक चोटि जाँदा हामीले हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।’
‘मेरा श्रीमान् दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। त्यसैले हामी लामो समय त्यत्रो खर्च गर्न सक्दैनौँ। बीबीसी
जेठ ८ गते, २०७६ - ११:२२ मा प्रकाशित